Stanford waa mid ka mid ah iskuulada ugu fiican adduunka waxaana halkan ku yaal tilmaame ku saabsan sida aad ku heli karto gelitaanka masters-ka khadka tooska ah ee Stanford.
Stanford waa mid ka mid ah hay'adaha ugu sarreeya adduunka, oo bixiya waxbarasho heer sare ah iyo heer sare iyada oo loo marayo koorsooyin kala duwan oo kala duwan, tas-hiilaad cilmi-baaris oo heer-sare ah, iyo macallimiin. Stanford waa dugsiga riyada dad badan oo ka kala yimid daafaha dunida.
Jaamacadda Stanford waa xarunta hal -abuurnimada, barashada, iyo daah -furka iyada oo gacan weyn ka geysatay daawada, injineernimada, farshaxanka, iyo dhinacyo kale oo gacan ka geysta horumarka iyo kobaca bulshadeeda iyo guud ahaan adduunka.
Iyada oo ah xarunta ugu weyn ee hal-abuurnimada, Stanford waa mid ka mid ah jaamacadaha doonaya inay waxbarashada u riixaan heerka xiga iyo iyadoo la adeegsanayo kaabayaasha dhijitaalka ah ee casriga ah waxay awoodday inay taas gaarto. Waxaan ka hadlayaa barashada khadka tooska ah, kombiyuutar iyo isku xirka internetka waxaad ku baran kartaa sida saxda ah ee Stanford lagu baro raaxada gurigaaga.
Intaad ku jirto, waa inaad aragto liiska 20 barnaamijyada kuleejka khadka tooska ah ee leh xiriirinta arjiga meesha aad ka baran karto koorsada kulliyadda khadka tooska ah, xoojiso xirfaddaada oo aad ku hesho shahaadada
Hal-abuurnimadan gaarka ah ee ka timid Stanford waa inay ka dhigto barashada mid aan kala go 'lahayn, ka dhigto waxbarasho heer caalami ah qof kasta oo danaynaya meel kasta oo adduunka ah. Tan macnaheedu waxay tahay inaad gacmahaaga ku heli karto koorso kasta oo aad dooratay barnaamij kasta oo shahaado ah oo aad rabto inaad ka sii wadato Stanford adoo riixaya badhanka.
Tani waxay ka caawisay siyaabo badan, marka loo eego in Stanford uu yahay dugsi aad u tartan badan isla markaana qaali ah, barnaamijkeeda barashada internetka wuxuu jaraya kharashka barashada koorsada Stanford illaa iyo hadda umana baahnid inaad ka walwasho arrimaha tartanka maadaama taasi aysan dhici karin khadka tooska ah
Si kastaba ha noqotee, ha bilaabin inaad ka careysiiso shahaadada waxaad heli doontaa laga yaabee inaad ka fikirto inaysan ahayn mid sax ah sida kii laga soo qaatay dugsiga caadiga ah waa inaad ogaataa hadda inaysan jirin wax farqi ah oo u dhexeeya shahaadooyinka aad ka heshay Stanford khadka tooska ah illaa dugsiga caadiga ah ee Stanford.
1.1 Koorsooyinka tooska ah ee Stanford ma mudan yihiin?
1.2 Miyuu Stanford Bixiyaa Masters-ka Online-ka ah?
1.3 Stanford Online Masters Ma Bilaashbaa?
2 Mastersford Online Masters
2.1 Masters ee cilmiga hawada iyo cirbixiyeenada
2.2 Masters ee cilmiga Biomedical Informatics
2.3 Masters ee injineernimada kiimikada
2.4 Masters ee injineernimada madaniga ah iyo deegaanka
2.5 Masters-ka ee injineernimada Xisaabta iyo Xisaabta
2.6 Masters ee sayniska kombiyuutarka
2.7 Masters ee injineernimada korantada
2.8 Masters ee sayniska maareynta iyo injineernimada
2.9 Masters ee Qalabka Sayniska iyo injineernimada
2.10 Masters ee injineernimada farsamada
2.11 Masters ee tirakoobka
2.12 Khidmadaha Waxbarshada Masters -ka ee Stanford Online
3 Sida Loo Helo Ogolaanshaha Mastersford Online Masters.
3.1 U qalmida loogu talagalay Ogolaanshaha Masterford Online ee Ogolaanshaha
3.2 Shuruudaha Master Stanford Online
3.2.1 Ujeedada ujeedada
3.2.2 Waraaqaha talada
3.2.3 Diiwaanka tacliinta ee dugsiyadii hore
3.3 Soo gudbinta Codsigaaga Masters -ka ee Stanford Online
Helitaanka xirfadaha, aqoonta, iyo barashada waxyaabo cusub ayaa ah kuwo aan dhammaad lahayn marka aad maalin walba la kulanto fursado kala duwan si aad u muujiso waxaad taqaan.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad barato xirfado/aqoon cusub, ku xoqdo xirfadaha jira, ama aad rabto inaad abuurto waddo xirfadeed oo cusub, Stanford khadka tooska ah ayaa kuu ah meesha.
Stanford khadka tooska ah wuxuu bixiyaa noocyo koorsooyin onlayn ah iyo barnaamijyo shahaado ah sida qalinjabinta iyo shahaadooyin xirfadeed, shahaadooyin jaamacadeed, shahaadooyin heer sare ah, iyo barnaamijyo kale oo caalami ah iyo barnaamijyo waxbarasho fulineed oo ay bareen Stanford maskaxdiisa ugu dhalaalka badan, macalimiin, iyo cilmi baarayaal si isku mid ah, si ay kaaga caawiyaan sidii xirfaddaadu u guulaysan lahayd.
Dhammaan barnaamijyada shahaadada aad rabto inaad ku sii socoto Stanford khadka tooska ah, waxaad heli doontaa shahaadada ka dib markaad dhammayso.
Koorsooyinka tooska ah ee Stanford ma mudan yihiin?
Marka hore, Stanford waa hay'ad darajo sare leh aqoonsigeeda iyo waxbarashadu waa heer caalami ah urur kasta iyo maamule kastana wuu ogyahay tan sidaas darteed wax kasta oo Stanford soo saaro ma aha mid ka madhan aqoonsigan.
Koorsooyinka Stanford waxay leeyihiin hufnaan tacliimeed, oo ay si isku mid ah u aqoonsan yihiin ururada adduunka oo idil, tanina waa sababta oo ah koorsooyinka waxaa wax ka dhiga macallimiin caan ah Stanford khadka tooska ah iyo kan tooska ahba.
Marka, koorsooyinka khadka tooska ah ee Stanford gebi ahaanba waa u qalantaa maaddaama weli laguu baray koorsadaada xiisaha ay leeyihiin borofisarrada soo saaray qalinjabiyeyaasha caanka ah, waxbarista iyo ku dhaqanku kama duwana waxa lagu bixiyo fasalka waxaadna baran doontaa oo lagu qalabeyn doonaa dhammaan aqoontaada iyo xirfadaha aad u baahan tahay inaad ka soo dhalaasho.
Shahaadadaada internetka ee koorso kasta oo Stanford ah aad ayaa loo aqoonsan yahay sidoo kale.
Miyuu Stanford Bixiyaa Masters-ka Online-ka ah?
Haa, Stanford waxay siisaa barnaamijyo shahaadada Master -ka ah oo dabacsan oo qof kasta oo danaynaya inuu iska qoro.
Master-ka khadka tooska ah ee Stanford ayaa lagu heli karaa waqti-buuxa iyo waqti-dhiman si aad u doorato midka adiga kugu habboon oo diyaar u ah qof walba inuu codsado.
Masterford-ka khadka tooska ah ee internetka waxay si gaar ah u caawin doonaan kuwa shaqeeya ee qaadanaya waqtiga dhiman waxay kaa caawin doonaan inaad sii wadato shaqada intaad wax baranayso si aad u kasbato shahaadada mastarkaaga khadka tooska ah iyo ka dib markaad dhammeyso, waxaad heli doontaa shahaadada sida qalin-jabiyaha buuxa ee Stanford.
Stanford Online Masters Ma Bilaashbaa?
Barnaamijka sayidka Stanford ee khadka tooska ah maahan bilaash, waa inaad bixisaa khidmadaha waxbaridda ee loo baahan yahay si aad wax u barato oo aad shahaadada uga hesho barnaamijka shahaadada mastarka tooska ah ee Stanford.
Laakiin Stanford online waxay bixisaa labo ka mid ah koorsooyin bilaash ah oo online ah maaddooyin kala duwan si aad gacanta ugu qabato oo aad u barato xirfado cusub, koorsooyinkan waxay u baahan yihiin lacag eber ah.
Mastersford Online Masters
Marxaladdan, hadda waad hubtaa in Stanford uu bixiyo sayidyo internetka ah laakiin waxaa laga yaabaa inaadan si dhab ah u garanayn barnaamijyada shahaadada Masterka ee la heli karo oo Stanford ku bixiyo khadka tooska ah waana halka aan ku qori doono si aan kuu caawiyo.
Hoos waxaa ku yaal liiska dhammaan barnaamijyada shahaadada Masterka ee khadka tooska ah ee Stanford ee aad codsan karto;
Masters ee cilmiga hawada iyo cirbixiyeenada
Masters ee cilmiga Biomedical Informatics
Masters ee injineernimada kiimikada
Masters ee injineernimada madaniga ah iyo deegaanka
Masters-ka ee injineernimada Xisaabta iyo Xisaabta
Masters ee sayniska kombiyuutarka
Masters ee injineernimada korantada
Masters ee sayniska maareynta iyo injineernimada
Masters ee Qalabka Sayniska iyo injineernimada
Masters ee injineernimada farsamada
Masters ee tirakoobka
Faahfaahin ku saabsan Barnaamijyada Degree Master-ka ee Stanford Online
Si aad isugu diyaariso inaad qabato doorar xirfadeed oo ku saabsan waaxda gaarka loo leeyahay ama dawladda, barnaamijkan wuxuu bixiyaa baris ballaadhan iyo cilmi baaris ku saabsan qaabdhismeedka, aerodynamic, hagidda iyo xakamaynta, iyo arrimaha ku riixitaanka diyaaradaha iyo dayax gacmeedka.
Barnaamijka shuruudaha 45-cutub oo si buuxda loogu bixiyo internetka waxay qaadataa 3 illaa 5 sano si loo dhammaystiro sidoo kale codsadayaashu waa inay dhammaystireen barnaamijka shahaadada koowaad ee injineernimada, fiisikiska, ama barnaamijka sayniska ee isbarbar dhiga.
Barnaamijkaan 'Masterford' ee khadka tooska ah ee internetka wuxuu ardayda ku tababaraa inay noqdaan hogaamiyeyaasha cilmi-baarista iyaga oo ku qalabaya xirfado tiro iyo xisaabeed si ay u xalliyaan dhibaatooyinka ka jira bayoolajiga iyo daawada.
Ardayda leh tababarka bayoolaji, sayniska kombiyuutarka, injineernimada, tirakoobka, cilmi baarista iyo dawaynta kiliinikada, sayniska xogta iyo falanqaynta, iyo farsamooyinka la xiriira ayaa lagu amray inay qaataan barnaamijkan maadaama ay xoojinayso aaggooda khibrad iyo furitaanka xitaa fursado shaqo oo ka sii wanaagsan iyo ka sii wanaagsan jagooyinka iyaga urur.
Barnaamijka shahaadada Masterka ee Biomedical Informatics waa shuruud ka kooban 45 cutub oo ay tahay in lagu dhammaystiro 5 shan sano gudahood marka la bilaabo barnaamijka iyo codsadayaashu waa inay hore u shaqaystaan ​​oo shaqeeyaan kahor intaysan bilaabin barnaamijka waana inay sii shaqeeyaan inta barnaamijka socdo.
Waxaad had iyo jeer dooneysay inaad ka hesho shahaadada mastarka injineernimada kiimikada ee Stanford, tani waa fursaddaada aad ku fulin karto riyadaada. Barnaamijku wuxuu si buuxda ugu diyaar yahay khadka tooska ah ee codsadayaasha xiisaha leh ee ka kala yimid adduunka oo dhan si ay u codsadaan oo ay u noqdaan xirfadle injineer kiimiko.
Ardaydu waxay qaadan doonaan koorsooyinka injineernimada kiimikada ee meelaha sida kinetics kiimikada, thermodynamics molecular, iyo injineernimada biochemical sidoo kale waxaa lagu dhiirigelinayaa inay qaataan koorsooyin xulasho ah sida hal -abuurka, kobcinta, tamarta, ama xisaabta la dabaqay. Dhammaan koorsooyinka aad dooratay waxaa dib u eegi doona oo ansixin doona lataliye.
Sidoo kale, ardaydu waa inay dhammaystiraan oo ay heleen barnaamijka shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee edbinta la xiriirta sayniska kahor inta aysan dalban barnaamijka sayniska kiimikada injineernimada. Barnaamijku waa 45 qaybood waxayna qaadataa 2-5 sano in la dhammaystiro taas oo ku xidhan hadba sida aad diirada u saarantahay laakiin waa inaysan ka badnaan 5 sano.
Injineerrada madaniga iyo deegaanka ayaa ah maskaxda ugu weyn ee ka dambeysa dhismaha dhammaan kaabayaasha hareerahayaga ah, aad ayey muhiim u yihiin waxaana si aad ah loogu raadiyaa qeybaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda.
Kasbashada aqoon sare ee injineernimada madaniga ah iyo deegaanka waxay kuu horseedi doontaa adduunyada naqshadaha kaabayaasha iyo abuurista iyadoo ay ugu wacan tahay hal-abuurka Stanford, waad baran kartaa oo aad ku heli kartaa aqoonta horumarsan ee loo baahan yahay iyada oo loo marayo khadka tooska ah ee Stanford.
Barnaamijku waa 45 qaybood wuxuuna qaadanayaa celcelis ahaan 3 ilaa 5 sano in la dhammaystiro.
Barnaamijkani wuxuu isu keenaa farsamooyin aan caadi ahayn, xisaabinta, xisaabta, injineernimada, iyo sayniska la dabaqay kuwaas oo si aan kala go 'lahayn loo wada baray loona baraa ardayda ku qalabeynaysa aqoon sare xagga hababka xisaabinta oo la hagaajiyay iyo naqshadaha codsiyada injineernimada iyo sayniska.
In kasta oo barnaamijkan la bixiyo inta badan ee khadka tooska ah laga helo waa in lagu dhammaystiraa xerada dhexdeeda si loo dhammaystiro shahaadada, waa barnaamij cutub 45 ah waxayna qaadataa celcelis ahaan 3 illaa 5 sano in la dhammaystiro.
Hagaag, dhammaanteen waan ognahay sida ay muhiimka u tahay sayniska kombuyuutarka xilligan la joogo iyo xitaa dadka aqoonta aasaasiga u leh jagooyin wanaagsan ka hayaan urur, laakiin shakhsiyaadka aqoonta sare leh waxay hayaan xitaa jago ka sii wanaagsan tii hore.
Stanford online waxay ku siineysaa fursad aad ku noqoto saynisyahan sare oo kombuyuutar ah, tani waxay kaa dhigeysaa boos weyn oo urur ah waxayna kuu fureysaa fursado shaqo oo ka wanaagsan kuwa gaarka loo leeyahay ama kuwa dadweynaha.
Kahor intaadan dalban codsadayaasha barnaamijkan waa inay dhammaystiraan barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda laga aqoonsan yahay. Barnaamijka sayniska kumbuyuutarka ee khadka tooska ah ee Stanford waa 45 unug wuxuuna u baahan yahay celcelis ahaan 3 illaa 5 sano si loo dhammaystiro.
Ku kasbato aqoon sare oo noqo aqoonyahan shahaado ka haysta injineernimada korantada iyada oo loo marayo barnaamijka shahaadada mastarka ee 'Stanford online'.
Kahor intaadan dalban barnaamijkan, waa inaad leedahay aasaas adag xagga sayniska jirka, xisaabta, iyo injineernimada. Waa inaad sidoo kale dhammaysay afar sano oo shahaadada koowaad ee jaamacadda ah iyo ugu yaraan hal sano oo ah barnaamijka dib-u-dhigashada sidoo kale.
Barnaamijka halbeegga 'Stanford online EE 45' waxaa lagu dhammaystiri karaa 3-5 sano.
Qaadashada koorsadani waxay u saamaxaysaa injineer inuu ka soo qaybgalo baahiyaha farsamo iyo maamul ee hay'ad, fikirkaaga muhiimka ah, iyo kartida falanqaynta ayaa la horumariyey, waxaad awoodi doontaa inaad samayso tijaabooyin si aad u naqshadeyso nidaamyo wanaagsan oo aad u fahanto sida loo falanqeeyo xogta si loo xaliyo dhabta- dhibaatooyinka dunida.
Si aad u codsato sayniska maareynta iyo injineernimada barnaamijka internetka, codsadayaashu waa inay haystaan ​​shahaadada injineernimada ama shahaadada laxiriira (mid weyn ama mid yar) oo ay kujiraan xisaab kaladuwan oo dhowr doorsoomeyaal ah iyo aljebra toosan.
Codsadayaashu waa inay sidoo kale leeyihiin aasaas adag xagga barnaamijyada, tirakoobka, iyo dhaqaalaha. Barnaamijku waa 45 unug wuxuuna qaadanayaa celcelis ahaan 3-5 sano in la dhammaystiro.
Ka qaybqaado barnaamijkan tababarka horumarsan ee aasaaska dawlad-adag iyo injineernimada qalabka si aad u hesho xirfado kaa dhigi doona saynisyahan iyo qalab injineer.
Barnaamijku si buuxda ayuu khadka tooska ah ugu socdaa wuxuuna u baahan yahay 3 illaa 5 sano si uu u dhammaystiro shuruudihiisa 45-unug.
Injineernimada makaanikada waa mid ka mid ah awoodaha ugu weyn ee wadista casrigan casriga ah, iyada oo loo marayo anshax -marintaan waxaa la suurtogeliyay ikhtiraacidda kombiyuutarada iyo mashiinnada kale. Stanford khadka tooska ah wuxuu siiyaa barnaamijka sayidkan qof kasta oo danaynaya si uu u hormariyo aqoontooda oo uu xirfad ugu yeesho aaggan waxbarasho.
Aagga takhasuska waxaa ka mid ah kontaroolada otomaatiga ah, nidaamyada tamarta, makaanikada dareeraha, farsamooyinka adag ee wareejinta kuleylka, iyo injineernimada biomechanical, waxaad heli doontaa aqoon sare oo lagu qalabeyn doonaa xirfadaha lagama maarmaanka u ah aagaggaas.
Codsadayaasha barnaamijka injineernimada farsamada waa inay dhammaysteen shahaadada koowaad ee injineernimada, fiisikiska, ama barnaamijka sayniska ee la xiriira. Barnaamijku waa 45 unug wuxuuna qaadanayaa celcelis ahaan 3 illaa 5 sano si loo dhammaystiro.
Codso koorsadan si aad u hesho aqoon tirakoob oo horumarsan, waxaad si siman u heleysaa xirfadaha fekerka muhiimka ah iyo falanqaynta, awood u yeelan kartaa inaad falanqeyso xogta, oo aad si hufan u xalliso dhibaatooyinka dunida dhabta ah.
Kahor intaadan qaadan barnaamijkan waa inaad ku fiicnaataa koorsooyinka heerka koowaad sida aljebra toosan, tirakoobka ama itimaalka, iyo barnaamijyada.
Tirakoobka barnaamijka shahaadada internetka waa 45 cutub waxayna qaadataa celcelis ahaan 3 ilaa 5 sano in la dhammaystiro.
Khidmadaha Waxbarshada Masters -ka ee Stanford Online
Lacagta waxbaridda ee Stanford Online Masters waa $ 1,352 unugkiiba barnaamijyada oo dhan.
Anigu ma aanan bixin khidmadda waxbarashada barnaamij kasta maxaa yeelay dhammaantood waa isku mid. Waxbarashada koorso kasta waa $ 1,352 cutubkiiba wuxuuna koorso waliba u dhaxeeyaa 3-5 cutub waana inaad kasbataa 45 cutub oo dhibco ah 5 sano gudahood laga bilaabo taariikhda aad bilaabatay si laguu siiyo shahaadada mastarka.
Faahfaahintaan, waa inaad ogaataa barnaamijka kugu habboon ee ku habboon horumarinta xirfaddaada. Kadib dhammaystirka barnaamijka aad doorbidayso, waxaad heli doontaa isla shahaadadii uu ardayga qalin -jabinta Master -ka caadiga ah ee Stanford helo, farqi ma laha.
Sidoo kale, inta lagu gudajiro barnaamijkaaga master-ka ee internetka, waxaa lagaa filayaa inaad shaqo waqti-buuxa ah hesho.
Waqtigaan la joogo waa inaad go'aansatay barnaamijka mastarka internetka ee Stanford ee aad rabto inaad hesho waana taasi talaabada ugu horeysa ee lagu codsado gelitaanka qadka tooska ah ee Stanford.
Marka hore, waa inaad doorataa barnaamij aad dooratay ka dibna u gudub koonto uga sameyso barta internetka ee Stanford oo aad bilowdo Codsiga mastarka internetka ee Stanford.
Waxaa jira shuruudo gaar ah oo ay tahay inaad ka gudubto si aad ugu qalmi karto gelitaanka.
U qalmida loogu talagalay Ogolaanshaha Masterford Online ee Ogolaanshaha
Haddii aad tahay codsade ka socda Mareykanka, waa inaad haysataa shahaadada bachelor-ka ee kulliyad ama jaamacad Mareykan ah oo la aqoonsan yahay.
Haddii aad ka timid meel ka baxsan Mareykanka ama meel kale oo adduunka ah, waa inaad si siman uga haysataa shahaadada koowaad ee jaamacadda kulliyad ama jaamacad la aqoonsan yahay.
Taasi waa waxa kaliya ee loo baahan yahay si loogu qalmo mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada sayniska Stanford ee internetka oo hubso in shahaadada bachelor -ka ee aad haysato ay tahay waxa lagama maarmaanka u ah gelitaanka barnaamijka aad doorbidayso.
Kadib waa inaad doorataa koorso oo aad ka gudubtaa heerka u-qalmitaanka, waxaa jira faylal loo baahan yahay oo looga baahan yahay inay la socdaan dalabkaaga.
Shuruudaha Master Stanford Online
Si loo tixgeliyo codsadayaasha gelitaanka waxay u baahan yihiin inay soo gudbiyaan dukumiinti aad u muhiim ah;
Tani waa feyl qoran oo codsadayaashu ay ku soo gudbin doonaan khadka tooska ah iyada oo qayb ka ah nidaamka codsigooda gelitaanka. Bayaanka ujeedku waa inuu qeexaa waxyaabaha soo socda;
Sababahaaga aad u dalbanayso barnaamijka la soo jeediyay ee Stanford khadka tooska ah iyo sida aad ugu diyaar garawday qaybtan waxbarasho.
Si aad uga caawiso guddiga gelitaanka qiimeynta kartidaada iyo dhiirigelinta, waxaa muhiim ah inaad wax ka qorto qorshooyinkaaga mustaqbal ee mustaqbalka iyo dhinacyada kale ee asalkaaga iyo xiisahaaga.
Ujeeddadaada ujeeddada toos uga dhig barta oo macno leh, waad soo gudbin kartaa hal fayl laakiin waa inaysan ka badnaan laba bog oo dheeri ah waana inay ahaataa Ingiriis.
Saddex xaraf oo talo bixin ah ayaa loo baahan yahay waxaana lagu maareeyaa nidaamka talo bixinta onlaynka oo qayb ka ah arjiga Stanford ee internetka. Qaybta talada ee arjiga waxaa lagu weydiin doonaa inaad iska diiwaangeliso macluumaadka soo socda;
Magaca seddex talo bixiye, inkasta oo aad isdiiwaangalin karto ilaa lix laakiin seddex kaliya ayaa lagugula talinayaa oo ha ku celcelin magaca ama macluumaadka xiriirka.
Machad ama isku xirnaan ganacsi oo talo-bixiye kasta.
Bixinta cinwaanada emailka ee ansax ah ee la-taliyayaasha aad liis garaysay
Waa inaad doorataa inaad ka tanaasusho xuquuqdaada iyo inkale si aad u aragto talo bixin.
Diiwaanka tacliinta ee dugsiyadii hore
Kuwani waxaa sidoo kale loo yaqaan 'transcript' waana inaad soo gudbisaa dhammaan qoraalada laga soo qaatay kulliyad kasta iyo jaamacad kasta oo aad ka soo qayb gashay ugu yaraan hal sano
Iyada oo qayb ka ah nidaamka dalabka waxaa lagaa doonayaa inaad gasho laba imtixaan oo kala ah;
Imtixaanka Diiwaangelinta Qalinjabinta (GRE) waa ku khasab qof walba inuu qaato oo,
Imtixaanka Ingiriisiga oo ah Luqad Shisheeye (TOEFL) waa ikhtiyaari marka laga reebo ardayda ka timid waddamada afkooda koowaad uusan ahayn Ingiriis.
Haddii aad ku dhacdo qaybta qaadashada labada imtixaan, qaado oo soo qaado buundooyinka intaad ku jirtid dalabkaaga.
Soo gudbinta Codsigaaga Masters -ka ee Stanford Online
Kadib uruurinta dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka ah, inta lagu jiro soo dejinta, cabirka faylka ee dukumiinti kasta waa inuusan ka badnaan 10MB oo dhammaan nuqullada waa inay ahaadaan kaliya madow iyo caddaan. Waxaa kale oo lagama maarmaan ah inaad haysato nuqullo kuu gaar ah oo ah faylasha aad soo gelisay maadaama Stanford uusan dib kuugu soo celin doonin ama dhinac kale.
Ka dib markaad dhammaystirto dalabkaaga oo aad soo gudbiso, waxaa lagu geyn doonaa bogga lacag bixinta si aad u sameyso khidmadda dalabka hal mar ah $ 125 iyada oo la adeegsanayo hababka lacag -bixinta onlaynka ah ee leh kaarkaaga deynta ama kaarka deynta.
Waxaad sidoo kale fursad u heli doontaa inaad ka daabacato arjigaaga oo dhameystiran diiwaankaaga waxqabad.
Tani waxay soo afjaraysa maqaalkan ku saabsan sida loo helo ogolaanshaha masters-ka khadka tooska ah ee Stanford, laakiin haddii aad dareento inaadan xamili karin laakiin aad weli rabto inaad xoojiso xirfadahaaga oo aad xirfad dheeraad ah yeelato ka dib eeg liiska 13 koorsooyin tababar oo online ah oo loogu talagalay ardayda iyo shaqaalaha kuwaas oo la hubo inay kugu qalabeeyaan aqoonta iyo xirfadda aad u baahan tahay si aad xirfadle ugu noqoto xirfaddaada.
Stanford masters-ka internetka
Previous Post:10 -ka ugu sarreeya ee Sayniska ee Shaqooyinka Bayoolaji
Post Next:6 Rajooyinka Xirfadda Sare ee Amniga Cyber
Pingback: 4 Koorsooyinka Shahaadada Sare ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Shahaadooyinka 2021
Pingback: 15 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah oo Lacag La'aan ah Dadka Waaweyn 2021